Wariye Tuuryare oo la aasay + Sawiro. - Caasimada Online
Home Warar Wariye Tuuryare oo la aasay + Sawiro.
Wariye Tuuryare oo la aasay + Sawiro.
Waxaa maanta Muqdisho lagu aasay Allaha unaxariistee wariye Maxamed Maxamuud Tuuryare oo xalay ku geeriyooday Isbitaalka Madiina Magaalada Muqdisho kadib dhaawac kasoo gaaray rasaas dhawaan kooxo hubaysan ay la dhaceen ayaa maanta meydkiisa lagu aasay qabuuro ku yaalo deegaanka Jazeera ee duleedka Muqdisho.
Marxuumka Aaskiisa ayaa waxaa kasoo qeybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan bahda Saxaafada oo ay kamid ahaayeen shaqaalihii uu la shaqeynaye ee Idaacada Shabeele kuwaasi oo gabi ahaanba muujinaye dareen ku aadan sida ay kaga xun yihiin geerida ku timid Marxuum Tuuryare.
Waxaa Madasha aaska uu ka dhacay ayaa lagu arkaye qaar kamid ah ehelada marxuumka oo ilmaynaye iyo qaar kale oo kamid ah dadweynihii kasoo qeybgalay oo iyana dhankooda sixun kaga walaacsanaa geerida Wariyaha,kuwaasi oo alle uga baryay in naxariistii jano uu ka waraabiyo marxuumka.